Iphunga Chanel "Mademoiselle"
Ngo-2001, indlu fashion Chanel uye wanyathelisa enye amakha eseyintsha - amakha Chanel "Coco Mademoiselle". Kuyinto kokubili engasindi Iphunga isifazane, futhi ngesikhathi esifanayo uqweqwe ocebile ezimibalabala-chypre. Amanothi kokuqala uhlamvu citrusy: Mandarin, olintshi, bergamot - uhlobo Splashes eliqhakazile freshness. Eyesibili inothi - ezimibalabala futhi amnandi. Lapha kukhona rose, jasmine ne mimosa. Chanel Iphunga fu elinobuthi "Mademoiselle" umelwe izinongo: must, vanilla, patchouli futhi vetiver.
Lokhu iphunga yakhelwe abasha, yesimanje, abesifazane ezisemadolobheni kokuzethemba. Sweet Iphunga ezimibalabala Ngaphezu ofanele njengoba izikhatha zomoya oshisayo ligcwele eziningi iphunga, futhi ehlobo kungcono ukukhetha okuthile obucayi xaxa futhi ezicashile isizini abandayo. Chanel "Mademoiselle" ayimkhangi, ujike amakhanda nomaphi. Singasho ukuthi lena iphunga isimo. Ngisho ngaphandle kokubona Omuny enhle umzila ezimibalabala-okubabayo, ungakwazi ukudweba isithombe olunzima ke. Kuyinto imfashini, stylish, ibhizinisi owesifazane owazi kahle lapho futhi yini iya.
Iphunga Chanel "Mademoiselle" uvezwa lokuhlala ehlukene: amakha perfume toilette, amakha, isiqedaphunga. Lokufuduka izitsha eziyisikhombisa futhi ahluka probe "inkosi usayizi" 200 ml.
Akuwona wonke umuntu uyazi umehluko phakathi amakha, amanzi yangasese kanye lamafutha. Gcwalisa lokhu igebe ulwazi. Ngakho, umehluko oyinhloko ketshezi ezintathu kuqukethwe lokuhlushwa kuphuma amafutha anephunga elimnandi. I bagxila kakhulu - amakha, ziqukethe-40% perfume akhiphe. Okulandelayo ku iphunga ocebile amanzi lamafutha. It okuqukethwe uwoyela - kufike ku-20%. Futhi indawo yokugcina - amanzi yangasese nge lokuhlushwa 5-15%.
Yingakho umehluko flavour. Ngakho, amakha "Coco Mademoiselle" kuyodingeka lahlukene Iphunga. Basuke ngokugcwele liveze obala Iphunga 1-2 amahora. Futhi imimoya njengabakhulu kunani lonke ukumelana uketshezi. Ngokwesilinganiso, awaphathele 3-4 amahora. Eau de toilette Chanel "Mademoiselle" lidlulisela amanothi sokuqala ngqá amakha. iphunga lakhe njalo kulula futhi perfume noma amanzi amakha obucayi xaxa.
Packaging ukunambitheka kuyindlela unxande ibhodlela esiqinile. Akukho lutho engadingekile futhi yimikhuba. Ngo-1921 i-Coco abadumile, ukukhulula Iphunga yakhe yesihlanu, yaletha fashion amabhodlela ezinjalo. Wakhumbula ukuthi into esemqoka - okuqukethwe, hhayi ifomu.
Bayalithakasela Isasasa Esinalo iphunga Chanel "Mademoiselle" kubangelwa kahle kokuqhuba ukukhangisa imikhankaso. Yini esiyibona leaflet ukukhangisa? Owesifazane, lembethe ngendlela elula, e ihembe elimhlophe kanye black ipensela isiketi. Kodwa kubukeka sengathi akuyona ska, kodwa kunalokho okuxekethile ekhululekile. Isizathu salokho - amehlo akhe. Emehlweni akhe sibona ukuzehlisa nomdlandla yiziphazamiso ezihehayo. Njengenjwayelo, ngesimo edonsa bahlukene: Ngakolunye uhlangothi - oda esiqinile, ngakolunye - bemvelo abanonya.
ukubheja Lungile ibekwe phezu imodeli owaziwa ukukhangisa. Uma othile bazifunde, kuba Kira Naytli, ngubani izinkanyezi ku akukhuthazwa "Pirates zaseCaribbean." Inkanyezi owaziwa, ngokuqinisekile ukukhuthaza Iphunga amasha okwamanje.
Iphunga "Coco" Chanel sasivumela ayegcwele, ngakho badinga sebenzisa isexwayiso - ungalilahli "binda" abedlula ngendlela amakha yabo. Kwanele ukubeka elilodwa noma amabili amathonsi yona ezindaweni onesigqi zomzimba.
Injani tinting kanye Umbala amashiya.
A primer ngoba ubuso. Izindlela Yokusebenzisa
Khiya enze-up: Uhlolojikelele, izici isicelo kanye nokubuyekeza
Red Lipstick - umngane noma iyiphi intombazane
"Mazhirel" Iphalethi. imibala Magic of "L'Oreal Professional"
Kuyini urethral stricture? Izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha zamanje
Ukwelashelwa plantar fasciitis: amalungiselelo izincomo. Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu
Izihloko ezithakazelisayo eThire
Winter slingokurtka: kanjani ukukhetha ke?
Ngezigaba Typological izilimi ezibonelweni. Isijobelelo ngolimi Russian
"Erespal" - isiraphu izingane kanye nabantu abadala
Ukuqubuka silume phezu imilenze: Ubangela, zokuvimbela
Imigomo kanye ngokumelene
Kungakanani ukushayela eBulgaria kusuka eMoscow: ama-nuances of travel
Uyini imfundiso lempi
Ihhotela Thavorn Beach Village Resort SPA (Thailand, ePhuket.): Ifotho nokubuyekeza